Aymara manhamba kubva 1 kusvika 100: iwo akanyorwa sei - UniProyecta
Muchinyorwa chanhasi tichaenda kunzvera mukati uye kudzidza zvishoma nezvazvo Mutauro weAymara, inozivikanwawo seAymara, iyo inotaurwa nevanhu vakasiyana siyana veBolivia, pamwe nevamwe nyika dzakasimba dzeLatin America dzakadai seArgentina kana Chile. Pachiitiko ichi tiri kuzokuratidza nhamba dzazvino dzeAymara, seizvo dzimwe nyanzvi dzinovimbisa kuti kuverenga kwavo kwagara kusiri kwakadai.
Kunyangwe iwe uchigona kutanga nekudzidza nhamba yega yega kubva pa1 kusvika ku100 zvakasiyana, chinhu chakanakisa kuita kudzidza kuvaka manhamba. Nenzira iyi, zviri nyore kwazvo kudzidza ese manhamba muAymara nemazvo. Sezvo isu taizoita nechero imwe yekuverenga manhamba, chinhu chekutanga kudzidza manhamba kubva pa0 kusvika pa9:
Muchiitiko che zero, kune nzira dzakasiyana dzekuidaidza:
0 ch 'shandisa
Iye zvino manhamba kubva 1 kusvika 9:
Icho chikonzero nei Maya y Paya vane akasiyana mä y pä parutivi nekuti izvi zvinoshandiswa kana iyo nhamba ichishanda seyakagonesa. Ndokunge, kana tikati "imbwa", taizofanira kuti "mä anu". Panyaya yemakumi, mazana nemazana, vanonzi zvinotevera:
Heino vhidhiyo yatakugadzirira iwe kuti unzwe kududzwa kwakakodzera:
Aymara nhamba notation yakatosiyana, saka kuinzwisisa haina kunanga semimwe mitauro. Tichifunga nezve manhamba ekumadokero, kana tichida kutaura makumi mana nematatu, semuenzaniso, isu taizofanira kuora kuita makumi uye zvikamu zvinotevera:
43 = 4 gumi + 3 imwe = 4 · 10 + 3
Mune Aymara manhamba makumi ari tunka, mazana ari pataka, zviuru waranqa uye mamiriyoni miriyoni, saka tinosvika pamhedziso inotevera:
Suffix ni inoshandiswa kana paine zvikamu, zvimwe zvacho zvinoramba zvakafanana. Kana iyo nhamba iri zana kana gumi, hazvinganzi mä pataka kana mä tunka, asi mune iyi nyaya chete pataka uye tunka ndizvo zvinofanirwa kutaurwa. Rangarira kuti izvi zvinongoshanda chete kana tiri kutaura nezvemakumi, mazana kana zviuru.
Kupfupisa mutemo we ni, ngatiti haigone kushandiswa mukati mekuvaka nhamba. Ndokunge, kana paine unit uye ikashandiswa, inogara ichifanira kuiswa kumagumo, haufanire kumboishandisa.
Nhamba muAymara inogona kuverenga kusvika kumazana emabhiriyoni, kunyangwe chokwadi chiri chekuti huwandu hwakakura kudaro haubatsire Aymara yemazuva ano.
Kana iwe usina kunzwisisa zvakanaka mitemo yekuvaka, ipapo iwe uchaona tafura ine ese manhamba kubva 1 kusvika 100:
Maitiro ekunyora manhamba muAymara kubva 1 kusvika 100
Uye izvi zvave zvese zanhasi, isu takamirira iwe muchitsauko chinotevera chewebhu ino, apo patichadzidza chimwe chinhu chitsva, sezvatinoita mazuva ese. Kana uchida, Iwe unogona here kuratidza musoro wenyaya wekutaura nezvayo pazasi mune zvakataurwa? uye isu tichazvifunga nezvayo mune ramangwana zvinyorwa.
Guarani nhamba kubva pa1 kusvika zana
kudzidziswa » tsika nemagariro » Aymara manhamba kubva 1 kusvika 100
5 mazwi pane "Iwo manhamba muAymara kubva 1 kusvika 100"
Mbudzi 11, 2018 pa3: 44 pm
Kukadzi 16, 2019 pa4: 17 pm
Kukadzi 21, 2019 pa11: 58 pm
Ndatenda ndakaita basa rechikoro rino rewebhu peji
Kurume 9, 2019 pa12: 37 am
Ndatenda, zvakandibatsira zvakanyanya ☺😆😆😆😊
Gumiguru 15, 2019 pa9: 25 pm
Ini handizive kana vaigona kuita hunyanzvi muAymara uye muchiSpanish